युएईको अहालिया एक्सचेञ्जबाट पैसा पठाउँदा १ किलो सुन र कार जित्ने अवसर, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
HOME » युएईको अहालिया एक्सचेञ्जबाट पैसा पठाउँदा १ किलो सुन र कार जित्ने अवसर
युएईको अहालिया एक्सचेञ्जबाट पैसा पठाउँदा १ किलो सुन र कार जित्ने अवसर
मिति: 2019-05-05 00:00:00
देश : --select--
आयोजक: हालिया एक्सचेञ्ज
युएई । युएईको लोकप्रिय एक्सचेञ्ज कम्पनी अल अहालिया एक्सचेञ्जले समर प्रोमोसन सार्वजनिक गरेको छ। मे ५ देखि जुलाई ३ सम्म चल्ने यो प्रोमोसनमा १ किलो सुन र १० वटा कारहरु पाउन सकिने अहालिया एक्सचेञ्जले जनाएको छ।
समर प्रोमोसन २०१९ नाम दिइएको यस पुरस्कार योजनामा सहभागी बनेर सुन र कारहरु जित्न अहालिया एक्सचेञ्जले आफ्ना सबै ग्राहकहरुलाई आग्रह गरेको छ। यो समर प्रोमोसनको पहिलो ३ वटा कारको सार्वजनिकीकरण अबुधावीमा आगामी जुलाई ४ तारिख हुनेछ।
त्यसैगरी दोस्रो ३ वटा कार सारजामा जुलाई ७ मा सार्वजनिक हुनेछ भने मेघा प्राइज १ किलो सुन र ४ वटा कारको घोषणा दुबईको अलकुज शाखामा आगामी जुलाई ८ तारिख घोषणा हुने अहालिया एक्सचेञ्जले सुचित गरेको छ।
यो अवधिमा अहालिया एक्सचेञ्जका कुनै पनि शाखाहरुबाट पैसाको कारोबार गर्दा उक्त पुरस्कार योजनामा स्वतः सहभागी बन्न सकिने अहालिया एक्सचेञ्जका नेपाल म्यानेजर बेनीमाधव ढकालले बताएका छन्।
अहालिया एक्सचेञ्जमा बिगत १२ वर्षदेखि कार्यरत नेपाल म्यानेजर बेनीमाधव ढकालका अनुसार विगतमा अहालिया एक्सचेञ्जबाट पैसा पठाउने धेरै नेपालीहरुले विभिन्न पुरस्कारहरु पाएका छन्।
अधिल्लो वर्षको समर प्रमोसनको मेधा पुरस्कार इलामका नरेन्द्र मगरले १ किलो सुन पाएका थिए । मगरले झापामा अध्ययन गरिरहेकी आफ्नी बहिनीलाई पैसा पठाउदा अहालिया एक्सचेञ्जबाट एक किलो सुन पाएको र उक्त सुन युएईमै बिक्री गरी पैसा लिएर मगर नेपाल फर्किसकेको ढकालले बताए।
अहालिया एक्सचेञ्जबाट पैसा पठाउदा २०१३ मा पनि दैलेखका रामबहादुर कट्वाललाई १ लाख दिराम पुरस्कार परेको ढकालले जानकारी दिएका छन्। अन्य एक्सचेञ्जको तुलनामा अहालिया एक्सचेञ्जले पैसाको रेट पनि बढी दिने र सेवा शुल्क पनि सस्तोमा लिने अहालिया एक्सचेञ्जका अपरेसनल म्यानेजर कमल सुब्बाले प्रष्ट पारे।
सुब्बाका अनुसार अहालिया एक्सचेञ्जबाट पैसा पठाउने धेरै नेपालीहरुले कारहरु, सुनको सिक्काहरु पाएका छन्। उनले यो पुरस्कार योजनामा सहभागी भएर सुन र कारहरु जित्न युएईमा रहेका सबै नेपालीहरुलाई अनुरोध गरेका छन्।